Broken Finger (လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
Broken Finger (လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း)
Update Date မတ် 13, 2018 .3mins read
Broken Finger (လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း) ကဘာလဲ။
သင့်လက်ချောင်းများရှိအရိုးများကို အရိုးဆစ်များphalangesများဟုခေါ်သည်။ လက်ချောင်းတခုတွင် အရိုးဆစ်သုံးခုရှိသည်။ ခြွင်းချက်အနေဖြင့် လက်မတွင် အရိုးဆစ်နှစ်ခုရှိသည်။ တခု(သို့)တခုထက်ပိုသောထိုလက်ရိုးဆစ်များကျိုးပါကလက်ချောင်းရိုးကျိုးခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေသည်။ လက်ကျိုးခြင်းသည် လက်အားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အရိုးဆစ်မဆိုကျိုးနိုင်သည်။ သင့်၏လက်သီးဖုများသည်လည်း သင့်လက်ချောင်းရိုးများဆုံရာနေရာဖြစ်ပြီး ထိုနေရာတွင်လည်း ကျိုးနိုင်သည်။
Broken Finger (လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Broken Finger (လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
လက်ချောင်းများသည် အလွန်နာကျင်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် သင့်လက်ချောင်းများကို လှုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါတွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်တခါတရံတွင် နာကျင်မှုသည် စူးစူးဝါးဝါးမဟုတ်ပဲ ထိုနာကျင်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေနိုင်တတ်သည်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနာကျင်မှုမရှိသော်လည်း ဆေးကုသမှုမလိုအပ်ဟုမဆိုလိုပါ။
Broken Finger (လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လက်ရှိအစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင် လက်ချောင်းများသည် ထိခိုက်မှု
အန္တာရာယ်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများဥပမာတူ(သို့)လွှဖြင့် အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင်လည်းသင့်လက်ချောင်းကို သင်ထိခိုက်စေတတ်သည်။ လျင်မြန်သောအရှိန်နှင့်လာသောအရာ ဥပမာ-ဘေ့ဘော တခုခုသင့်လက်ကိုထိမိလျှင်လည်း သင့်လက်ချောင်းကျိုးသွားနိုင်သည်။ တံခါးတခုတွင် သင့်လက်ညှက်မိခြင်းနှင့်သင့်လက်ကိုလဲကျသောအခါထောက်မိခြင်းဖြင့်လည်း သင့်လက်ချောင်းများကို ကျိုးသွားစေတတ်သည်။ ထိ
ခိုက်ဒဏ်ရာ၏သဘာဝနှင့် အရိုး၏ခိုင်ခံ့မှုသည် အရိုးကျိုးခြင်းရှိမရှိ
ကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အရိုးပွခြင်းနှင့် အာဟာရဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းကဲ့
Broken Finger (လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
လက်ချောင်းကျိုးခြင်းအားအဖြေရှာအတည်ပြုမှုသည် သင့်ဆရာဝန်မှသင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်အားမေးမြန်းမှုနှင့်ကြည့်ရှူကိုင်တွယ်ထိတွေ့စစ်ဆေးခြင်းမှ စတင်သည်။ လက်ချောင်းများကိုဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့်လက်ချောင်းကျိုးခြင်းရှိမရှိကို သိနိုင်သည်။
Broken Finger (လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကျိုးသွားသော လက်ချောင်းအား ကုသမှုသည် ကျိုးသွားသည့်နေရာနှင့် အရိုး၏တည်ငြိမ်မှုရှိမရှိပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ကျိုးနေသောလက်ချောင်းအား ဘေးကပ်ရပ်ရှိလက်
သည်။ မတည်ငြိမ်သေးသည့် ကျိုးထားသောအရိုးများအား ငြိမ်ငြိမ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ဆရာဝန်များသည် သင့်၏ကျိုးထားသောအရိုးအားပုံမှန်အနေအထားအတိုင်းညီညာ
သင့်ဆရာဝန်သည် ခွဲစိတ်ကုသပါလိမ့်မည်။ သင့်တွင် အောက်ပါအခြေအနေများရှိပါက ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဖြင့် ကျိုးထားသောအရိုးအား ငြိမ်အောင်ထိန်းထားရတတ်သည်။
အတွက် အကောင်းဆုံးကုသမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ပင်အပ်၊
ကျင့်ပျိုးထောင်မှုတို့ဖြင့် လက်၏စွမ်းရည်နှင့်ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိန်းကွပ်
ကာ ပုံပန်းမကျဖြစ်သွားခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျိုးသွားသော
ငယ်မှတစ်နှစ်အထိ များပြားသောအကြောင်းအရာများပေါ်မူတည်၍ ရှိနေနိုင်သည်။ ရောဂါတိုးတက်မှုအခြေအနေသည်လည်း မတူညီ
ပြင်အားထိခိုက်မှုကြောင့် အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်းရှိမရှိ တို့ဖြစ်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် လက်ချောင်းရိုးများကျိုးခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ပါရာစီတမော (သို့)အိုင်ဘူပရိုဖန်ကဲ့သို့သောဆေးစာမပါပဲဝယ်ယူရရှိနိုင်သည့်ဆေးများအား သောက်သုံး၍နာကျင်ကိုက်ခဲမှုအားသက်သာအောင်လုပ်ပါ။
ထိခိုက်ခံထားရသောလက်ကို သင့်နှလုံးနေရာ ထက်မြင့်အောင်မြှောက်ထားခြင်းဖြင့်ရောင်ရမ်းလာခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်သည်။ ထိုင်နေသောအခါနှင့်အိပ်သောအခါ အောက်မှ တစ်ခုခု ခု ထားကြည့်ပါ။
ရေခဲ(သို့)အအေးခံထားသော ပဲစေ့များပါသည့် အိတ်တခုကို အဝတ်ဖြင့်ပတ်ပြီး လက်ချောင်းပေါ်သို့တစ်နေ့လျှင်သုံး လေးကြိမ်စီ10 မိနစ်ခန့်အုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေနိုင်ပါသည်။
Broken finger. https://www.nhs.uk/conditions/broken-finger/Pages/Introduction.aspx#aftercare. Accessed October 19, 2017.
Broken Finger (Finger Fracture). https://www.healthline.com/health/broken-finger#overview1. Accessed October 19, 2017.
Broken Finger. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/broken-finger#1. Accessed October 19, 2017.